U jeedka kulanka u socda Mucaaradka iyo RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
U jeedka kulanka u socda Mucaaradka iyo RW Rooble
Kulamo siyaasadeed oo miisaan culus leh ayaaa ka socda Caasimadda, waxaana la filayaa in ay magaalada dib ugu soo laabtaan ciidankii Badbaado Qaran, haduusan Wasiirka 1-aad wax ka qaban boobka doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kulan u dhaxeeya Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka tirsan Golaha Midowga Musharixiinta, ayaa ka socda guriga Ra’iisul Wasaaruhu ka degen yahay Madaxtooyada.
Kulanka ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan boobka kuraasta Golaha shacabka ee Baarlamaanka 11aad ee JFS, oo ay cabasho xooggan ka qabaan Mucaaradka.
Sidoo kale, Musharixiinta, ayaa Ra’iisul Wasaaraha kala hadli doona isbedelka ku dhacay mowqifkii dhexdhexaadnimo ee uu ballan qaaday, maadaama uu indhaha ka daawanayo dhaca iyo boobka ka dhanka ah doorashooyinka.
War saxaafadeed gaaban oo shalay ka soo baxay Midowga Murashaxiinta, waxaa ay ku sheegeen in Goluhu maalamahan leeyahay kulamo dhexdiisa ah, iyo kuwo uu la yeelanayo Raysalwasaare Rooble, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo beesha caalamka.
Waxa ay hore u caddeeyeen in aysan aqbali doonin doorashooyinka degaannada qaar ee lagu billaabay boob qaawan iyo isku awood sheegasho, laguna tuntay dhammaan habraacyadii doorashada, waa sida ay hadalka u dhigeenne.
Waxa ay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sida ugu haboon oo dalka looga hirgelin lahaa doorasho hufan oo daahfurnaan leh, laguna badbaadiyo masiirka dalka iyo geedi-socodka dhismaha nabada iyo dawladnimada.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa laga dareemayaa cago-jiid siyaasadeed tan iyo markii uu dib uga soo laabtay dalka Qatar, wuxuuna xilal kala duwan u magacaabay xubno ka tirsan Kooxda Farmaajo.